Home Malunga ne-Innovus
Umsebenzi we-Innovus kukwenza ukuba indlela entsha yokucinga nokwenza izinto yeYunivesithi yaseStellenbosch ibe yinto exabiseke gqitha.
Sizama ukuphucula kangangoko ifuthe leYunivesithi yaseStellenbosch eluntwini lwaseMzantsi Afrika ngokusebenzisa iziphumo zophando lwale Yunivesithi ukukhuthaza ezoshishino yaye kudalwe nemisebenzi emitsha kunye neziveliso ezitsha kunye neenkonzo ezihlangabezana neemfuno zabo bonke abemi boMzantsi Afrika.
Kananjalo i-Innovus izama ukuxhasa le Yunivesithi ekuphakamiseni umgangatho wendlela yesi-5 yokungenisa imali.
I-Innovus yinkampani yeYunivesithi yaseStellenbosch ejongene nonxibelelana noshishino nokwenza izinto ngendlela entsha.
I-Innovus inoxanduva lokudlulisela ubuchwepheshe, elokunika inkxaso nokuphuhlisa oosomashishini, kunye nokwenza izinto ngokutsha apha kule yunivesithi. Sijongene nolawulo lokwenza ingeniso ngokwenza izinto ngendlela entsha kunye nokusebenzisa ipotifoliyo yokuqwetywa yingqondo kwale Yunivesithi ngokuzifumanela ilungelo lobunini baloo nto iqwetyiweyo, ukunikwa kwemvume nokusekwa kwamashishini angamahlumelo.
Ngelebhu yethu yokuyila amashishini i-LaunchLab, sinika iinkonzo ezahlukeneyo namathuba koosomashishini. Ngaphezu koku, ukuba nezabelo kwethu kwiqela lamashishini e-Innovus kuyinto exabiseke gqitha kule yunivesithi.
Izifundo ezifutshane zale Yunivesithi necandelo leLungelo loShicilelo ngokunjalo neeNkonzo zoRhwebo nazo ziwela phantsi kwe-Innovus.
Iwebhusayithi yethu izichaza kakuhle izinto esinelungelo lobunini kuzo kwaye inika izixhobo neengcebiso kubaqambi abanqwenela ukwenza ingeniso ngeembono zabo, nakubatyali-mali abafuna ukunceda ekuguquleni iimbono ezinkulu zibe yinto yokwenene.
Krwaqula iwebhusayithi yethu okanye uklikhe apha ukuze uqhagamshelane nathi malunga nesicelo esithile.